125 Zvinhu Zvekuita Kana Iwe Uchifinhwa: Iyo Yekupedzisira Chinyorwa! - Blog
125 Zvinhu Zvekuita Kana Iwe Uchifinhwa: Iyo Yekupedzisira Chinyorwa!
Asi hapana chinonyanya kukwezva chinouya mupfungwa.
Saka, chii chaunofanira kuita?
Neraki iwe, taisa pamwechete runyorwa rwezvinhu iwe zvaungaite kana kusuruvara kukarova.
25 Zvinhu Zvinonakidza Zvekuita Kana Iwe Wakafinhwa
1. Tamba mutambo wekadhi - hongu, kune mamwe aunogona kutamba wega, asi mitambo yakanakisa ndeyevatambi vakawanda. Mutungamiri ndemumwe wedu watinofarira - heino mitemo .
2. Tamba mutambo webhodhi - kune zviuru zvekusarudza kubva uye zvizhinji zvinopa kuputika kwekunakidzwa uye kuseka.
3. Tamba mutambo wecomputer - kunyangwe uri wega kana uine shamwari, unogona kunakirwa nedambudziko reimwe yemitambo isingaverengeke pakoni kana PC.
4. Tamba mutambo - pane zvakawandisa zvekunyora, asi wadii kuita tenesi, basketball, gorofu, kana chero chinotora fancy yako.
5. Tarisa bhaisikopo - inogona kuve yekare kufarira kwako kana chimwe chinhu chausati wamboona (ona yedu runyorwa rwe mafirimu anoita kuti iwe ufunge ).
6. Binge dzakateedzana - hapana magumo kune makuru akateedzana izvozvi ari kupihwa kuburikidza neTV uye kuyerera masevhisi. Bata duvet yako uye unakirwe pamubhedha.
7. Tarisa unonakidza YouTube mavhidhiyo - kubva kumakati anopenga uye akanaka vana kuti celeb ikundikane uye zvinhu zvisinganzwisisike zvakabatwa pa kamera, unenge uri LOLing kwemaawa.
8. Imba pamwe chete nekurova kwako kwaunofarira - kunyangwe iwe uri karaoke mambokadzi kana toni matsi, hazvina basa kana zvichikuita kunyemwerera.
9. Tamba nechipfuwo chako - katsi, imbwa, hamster, chihwenga… hazvina basa kuti ndezvipi, unogona kunakidzwa kuita newaunofarira asiri hooman.
10. Edza magadzirirwo matsva - tora bhurasho rako, bvudzi rekumwaya, bvudzi rekuomesa, gel, zvikamu, nezvimwewo uye uone kana paine chimiro chitsva chinokodzera iwe.
11. Bhururuka kiti - rega mhepo ive shamwari yako paunenge uchibhururuka, kunyangwe tsoka dzako dzakatsiga pasi.
12. Shanyira arcade - kana imwe ichiripo padhuze newe, rasika mukufunga uchitamba mitambo yekare uye enda kumichina ichangoburwa.
13. Hunt zvimwe zvipoko - tsvagurudza dzimwe nzvimbo dzine hushamwari padyo uye uve nenguva yekushanya uchivashanyira.
14. Dzidza hunyengeri - fadza shamwari dzako nekugona hunyengeri huchaita kuti vafembere kuti wakazviita sei.
15. Enda roller skating - tora kusvika kumavhiri masere ane ma skate kana mashizha uye woona panokutora mweya.
16. Endai parwendo rwemugwagwa - ita zvoga, pinda mumotokari, uye uone uko nzira yacho inokuendesa.
17. Enda kupikiniki - rongedza zvese zvaunofarira kubata, tora dzimwe shamwari, uye rova ​​yako yepaka paki.
18. Enda bowling - wakambosangana nemumwe munhu asingafarire bowling? Kunyangwe neni.
19. Ivai nekurwa kwemvura - kana mamiriro ekunze akanaka, tora mabhaluni emvura, pfuti, pombi dzemapaipi, uye swimwear uye enda musango!
20. Gadzira playlist - nyatso tarisa mimwe mimhanzi inoenderana pamwe zvakatenderedza dingindira. Zvakafanana nemixape, zvirinani chete.
21. Gadzira slip 'n slide - wozvikanda pasi zvakare uye zvakare.
22. Gadzira runyorwa rwezvipo - bhurawuza zvinhu online uye gadzira Wishlist yezvinhu iwe zvaungade kugamuchira zveKisimusi kana rako rekuzvarwa.
23. Tamba Twister - hauna kumbobvira wakura zvekutamba mutambo weparty neshamwari dzako.
24. Bhurawuza AskReddit - iwe unowana mimwe mibvunzo inotonhorera uye dzimwe mhinduro dzakanaka, asi zvinonakidza zvine simba.
25. Kufungidzira - uye hatisi kungoreva kumanikidza matambudziko ako. Rega kufungidzira kwako kumhanye bope. Chinhu chipi zvacho chinogoneka.
30 Zvinhu Zvekugadzira Zvekuita Kana Uchinetseka
1. Origami - kutendeseka, zvinonetsa, asi zvinonakidza, uye iwe unogona kugadzira zvimwe zvinoshamisa zvechokwadi kubva pakapeta pepa.
2. Kukwira chimwe chinhu - cheya chembere, zvimwe zvipenga zvevinyl, izvo zvipfeko zvausingazopfeke zvakare… kufema hupenyu mazviri zvakare.
3. Kubika kubika - makuki, makeke, mafekeji, uye zvingwa ndezvimwe zvezvinonaka zvaunogona kuita uye kunakidzwa (neshamwari nguva dzose iri zano rakanaka).
4. Ita maruva tafura yepakati - tora maruva furo uye maruva akasununguka uye uzvirongedze mune inoshamisa kuratidza kuti uende patafura yako yekudyira. (Tarisa uone iyi vhidhiyo dzidziso -> Maitiro Eko Kugadzira Yakanaka Ruva Kurongeka )
5. Tanga hwindo bhokisi miriwo gadheni - haufanire kuve wakasvibirira-zvigunwe kana kuva nebindu rekukura uye kunakirwa nemishonga mitsva.
6. Gadzira cocktail - edza ruoko rwako pakusanganisa nekusanganisa mweya yakasiyana siyana nevasanganisa kuti vagadzire chinhu chinonaka (zvakare, zvakanak kugovana neshamwari).
sei ndichinzwa kusara
7. Gadzira zvishongo - zviri nyore pane zvaunofunga kuti uwane zvekushandisa uye ugadzire yako pachako zvishongo nezvishongo.
8. Gadzira bhodhi rekuona - iri chaizvo kollaji yemifananidzo uye mazwi anoratidza zvinangwa zvako uye zviroto zvako muhupenyu.
9. Gadzira sipo yako wega - hongu, ndechimwe chinhu chaunogona kuita mukicheni uye unakirwe muchimbuzi. Heano mamwe mirairo.
10. Dhirowa chimwe chinhu - hungave hupenyu hwakadzikama, wega-pikicha, kana chimwe chinhu kubva pane chako fungidziro chawakaisa pasi pabepa. Heck, iwe unogona kunyange kungoita zvidhoma zvisina kujairika zvinhu.
11. Penda chimwe chinhu - tora iwo macolorcolor, maacrylics, kana mairi kunze uye isa bhurasho kune canvas / bepa.
12. Knit - kuruka kwakadzoka munguva hombe uye inogona kunge iri nzira yekuzorora yekushandisa masikati. Haisi yakaoma sekutaridzika uye inogona kudzidziswa nekukurumidza.
13. Crochet - zvakada kufanana nekuruka, zvakasiyana chete. Imwe nzira inonakidza yekuchengeta maoko ako akabatikana.
14. Sona - nemucheka uye shinda, unogona kugadzira mbatya, zvishongedzo, kunyangwe makisimusi eKisimusi kana uchida.
15. Shongedza kamuri - ronga yako yakanaka kamuri ine machati machati uye machira sampuli uye wozozviita.
16. Tora mifananidzo - dzevanhu, nzvimbo, shiri, mhuka, nharaunda, zvivakwa… chero chinobata ziso rako.
17. Gadzira / unganidza mhando - unogona kutenga uye kuvaka mhando dzakadzama dzese marudzi ezvinhu kubva mungarava kuenda kune iconic yemafirimu zvigadzirwa.
18. Vaka Lego - kunyangwe iwe uchiteedzera kuraira kana kugadzira chimwe chinhu kubva pane chako fungidziro, unogona kushandisa akawanda awa awa kuvaka zvinhu.
19. Nyora nhetembo / nyaya - rega kufungidzira kwako kutenderere uye nekuisa mamwe mazwi pasi pabepa.
makumi maviri. Nyora tsamba yerudo - kunyangwe iwe usina mumwe wako, nyora imwe kushamwari yako yepamoyo kana amai.
21. Bira rako wega doro - kune akawanda matikiti aunogona kutenga, kana iwe unogona kuedza kuzviita iwe pachako kubva pakutanga.
22. Gadzira makadhi ekukwazisa - kwemazuva ekuberekwa, Kisimusi, Isita, Zuva raAmai, kana chero mhemberero iri kuuya inotevera.
23. Dzidza calligraphy - kugona kunyora zvakanaka kunouya kunobatsira munzira dzese dzese. (Tinokurudzira zvikuru kosi iyi yepamhepo !)
24. Ita mimhanzi - tora chiridzwa kana uine imwe, kana kungo nyora mamwe mazwi uye uaimbe.
25. Ita imwe yekupenda mu - hazvichisiri zvevana chete, unogona ikozvino kutora mabhuku eruvara rwevakuru nekushamisa dhizaini.
26. Gadzira makenduru anonhuwirira - uine zvishoma zvishoma zvekunyungudika, kunhuhwirira, uye kumisikidza, unogona kuwana ako makenduru mumba mako. Ona pano kukurudzira.
27. Gadzira patchwork quilt - sonesa mizhinji yemachira machira pamwechete kuti uite chimwe chinhu chakanaka kupa pasi kuburikidza nezvizvarwa.
28. Gadzira bhuku remarara - chengetedza zviyeuchidzo zvako uye zvakakosha zvekuchengetedza munzvimbo imwe uye wedzera pazviri pese paunofinhwa.
29. Tanga chirongwa chehuni - kubva pamabhokisi ari nyore kusvika kumidziyo yemunda, unogona kugadzira zvakawanda nehuni, glue, screws, zvipikiri, uye saha.
30. Gadzira chimwe chinhu kubva pamapepa-mache - inyanzvi yehudiki yehudiki, asi hapana zvachose chikonzero nei uchigona kunakidzwa nepepa uye unama semunhu mukuru.
Unogona zvakare kuda (chinyorwa chinoenderera pazasi):
28 Zvinhu Zvekuita Kana Iwe Uri wega wega Uye Wakafinhwa Kunze Kwako Pfungwa
Nei Uri Kunzwa Kufinhwa Nehupenyu (+ Chii Chaunofanira Kuita Nezvazvo)
Maitiro Ekuita Nguva Kuenda Nokukurumidza (Kubasa Kana Chero Nguva)
16 Zvinhu Zvinonakidza Zvekuita Neshamwari Yako Yepamoyo
Izvo Zvakareruka Zvinhu Muhupenyu: Rondedzero Yemakumi mashanu Diki Mafaro
15 Zvinhu Zvinotonhorera Kuti Uite Kana Iwe Uchinetseka
1. Mira Motion Mifananidzo - hongu, pamwe chete nefoni yako, app, uye zvinhu zvakakomberedza imba yako, unogona kugadzira mavhidhiyo ane hupenyu.
2. Viga nguva kapisi - tora mudziyo unodzivirira mvura uye usina ngura, uzadze nezvinhu zvako pachako, uye uviga pane imwe nzvimbo kuitira kuti ugone kuchichera mumakore gumi kana kudarika (kana kuchisiyira mumwe munhu kuti awane).
3. Gadzira uye ubhururutse ndege dzendege - kukwikwidzana neshamwari dzako kutiza kwakanyanya uye kwakanyanya maekisesaizi.
4. Gadzira yakakosha kuenda kart - iwe unozoda huni, mavhiri, uye zvimwe zvinhu, asi iwe unosvika pakuikwikwidza kana wapedza!
5. Mujaho mota dziri kure dzinodzorwa - ingave mupaki yako yemuno kana munzira chaiyo, enda unokwikwidzana neshamwari dzako kuti uone kuti ndiani achatanga kusvika pekutanga kutanga.
6. Gadzira bhaisikopo - iwe neshamwari dzako munogona kunge muri nyeredzi pamunouya nenyaya, zvigadzirwa, uye zvipfeko.
7. Tarisa nyeredzi - uchifungidzira kuti kwasviba, enda kunze uye woisa maziso ako kumusoro (pamwe nerubatsiro rweteresikopu) uye unoshamisika pane zvakasikwa.
8. Dzidza gitare - ndicho chiridzwa chinotonhorera zvakanyanya, haungati here?
9. Dzidza kutunda - akakodzera ejuggling mabhora anoshanda zvakanyanya, asi iwe unogona kukanda zvakaringana chero chinhu chinogona kukwana muruoko rwako (ingo chenjera kuti haisi kuputsika).
10. Edza kutyora nyika rekodhi - hazvizove zvepamutemo kana ukadaro, asi inzira yakanaka yekuzvipokana iwe kumarudzi ese ezvinoshamisira uye zvinoshamisa zvinhu.
zvaunofanira kuita kana wako wakasuruvara af
11. Gadzira mabhaluni mhuka - iwe unozoda iyo chaiyo mhando mabhaluni, asi icho chinhu chaunogona kufadza vamwe nacho kana iwe uchinge uchizviziva.
12. Dzidza ku beatbox - dzidzira kugadzira uye kusanganisa ruzha rwakasiyana nemuromo wako.
13. Joinha yekufungidzira yemitambo ligi - kune mizhinji yemahara emahara mameseji emitambo yese mikuru mitambo.
14. Kutanga blog - inogona kunge iri chero chinhu chaunowana chinonakidza. Zvinogona kutokutorerawo madhenari mashoma futi.
15. Gadzira moto - ingova nechokwadi chekuzviita zvakachengeteka uye kumwe kunotenderwa.
Zvinhu zvinofadza zvekuita kana uchinetseka
1. Tsvagurudza mhuri yako - unogona kuita izvi pamhepo uye nekushanyira raibhurari yako yemuno kana chivakwa chehurumende panochengetwa zvinyorwa.
2. Dzidza mutauro - uye haifanirwe kunge iri imwe yaunotaura iwe unogona kudzidza mutauro wemasaini.
3. Ita chirahwe chemuchinjiko - pokana nehungwaru hwako kupokana nezviratidzo uye ona kana uchigona kupedzisa gridhi.
4. Tora mibvunzo yepamhepo - kune akawanda kwazvo nyaya nyaya yekuyedza yako trivia ruzivo.
5. Tanga kuunganidza - chechero chii chinotora chako chinoshamisira. Mari, maposikadhi, magaba edoro, Beanie Vacheche.
6. Kutsvaga kwekutenga - shanyira zvitoro zvinotengesa zvinhu uye misika yeflea kuti uone kana iwe uchigona kuwana chero zvinhu zvakakosha zvichidhura. Unogona kuzvichengeta kana kuzvitengesa kuitira purofiti.
7. Vanhu vanotarisa - tsvaga nzvimbo ine vanhu vazhinji wobva watarisa woshamisika kuti ndivanaani uye chii chiri kuitika muhupenyu hwavo.
8. Enda kuhurukuro dzavose - mijenya inoitika zuva rega rega revhiki mumaguta makuru, uye uchavawana mumataundi madiki nemisha zvakare. Ivo vanofukidza mhando dzese dzenyaya.
9. Invent chimwe chinhu - pane chinhu chaunoshuvira kuti uve nacho chisipo? Invent it. Ndiani anoziva, iwe unogona kuita mari kubva kwazviri.
10. Tora chaiwo miziyamu marwendo - miziyamu mizhinji mikuru yazvino inobvumidza iwe kuti uvashanyire kubva kunyaradzo yeimba yako pachako nemasaiti avo chaiwo.
11. Ita hurukuro nemunhu wausingazive - hauzive kuti ndezvipi nyaya zvaunogona kunzwa. Iwe unogona kugara pasi padyo neicho chaicho-hupenyu Sango Gump.
12. Tarisa chinyorwa - dzidza chimwe chinhu chitsva pamusoro penyaya yaunofarira. Hurukuro dzeTED zvakare dzakanaka kukurudzira pfungwa.
13. Tora kosi yepamhepo - kune makosi ezvese chaizvo zvaunogona kufungidzira ... uye zvakawanda zvezvinhu zvausingakwanise!
14. Iva nezvinangwa - funga nezvezvinhu zvitatu zvaunoda kuzadzisa imwe muvhiki inotevera, imwe mumwedzi unotevera, uye imwe mugore rinotevera.
15. Tanga honye - regai izvi zvisikwa zvine mutsindo zvichengete zvimedu zvako zvekudya. Iko kukunda-kuhwina kune vese vanobatanidzwa.
15 Zvinhu Zvinoshanda Zvekuita Kana Iwe Uchifinhwa
1. Enda geocaching - tsvaga pfuma. Ok, kwete pfuma, asi iwe uchiri kufanira kuenda kunzvimbo uye kutsvaga zvinhu uye zvinokutora iwe pane chiitiko.
2. Enda kumahombekombe - hongu, pfuma chaiyo panguva ino. Pirate pfuma, pamwe. Pamwe kwete, asi iwe unogona kuwana zvimwe zvinonakidza zvinhu zvakashambidzwa pamhenderekedzo yegungwa.
3. Famba famba - kwete, zvakakomba, buda mumba uye isa tsoka imwe pamberi peimwe. Inoita zvishamiso kumuviri wako nepfungwa.
4. Enderera pakufamba nzendo - ita kufamba zvishoma kunakidze nekutora munhoroondo yeguta kana guta.
5. Chengeta kubindu rako - kuchera, kucheka, kucheka, kudyara, kuchekerera, sora, kudyara, nezvimwe.
6. Enda shiri uchiona - shora shamwari dzedu dzine minhenga nekupinda muchisiko uye kutsvaga akawanda marudzi emarudzi sezvaunogona.
7. Furuji - kungave kwemichero, miriwo, kana zvimwe zvinodyiwa, ingo chenjera kuti iwe unongonhonga zvinhu zvawakaratidza kuti zvakanaka.
8. Kudzidziswa kwedunhu - ndiyo nzira yakanaka yekugadzirisa yakawanda yemhando dzakasiyana dzemhasuru mune imwe nzira.
9. Enda kunhonga marara - rongedza nharaunda yako yemunharaunda uye chengetedza mhuka dzesango dzinogarako nekubvisa marara.
10. Kuzvipira - ipa nguva yako kune avo vasina rombo rakanaka kana kune chaunofarira iwe.
11. Endai kuvhima tsikidzi - ona kuti ndedzipi dzakasiyana mhando dzezvinokambaira zvinokambaira zvaunogona kuwana mubindu rako kana paki yemuno.
12. Tamba kumatoni ako aunofarira - isa pane imwe mimhanzi yekusimudzira uye kupaza kufamba mukunyaradza kweimba yako.
13. Enda kujimu - iwe unogona zvakare kushandisa ino nguva kuti iyo yekurovedza musangano ibude munzira.
14. Enda nebhasikoro - rova ​​migwagwa kana kumaruwa pamavhiri maviri uye unzwe mhepo kumeso kwako sezvaunotarisa nzvimbo nyowani.
15. Enda unoshambira - shanyira dziva rako remunharaunda uye isa mamwe marefu mukati. Iyo yakanaka muviri wese-kurovedza muviri zviri nyore pazvibatanidzwa.
15 Zvinhu Zvinoshanda Zvekuita Kana Uchinetseka
1. Ronga shefu yako yemabhuku - iwe unogona kuzviita nearufabheti, nerudzi, nemunyori, kana kunyangwe neruvara rwebhuku musana.
2. Declutter - unenge uine zvinhu zvakawanda kupfuura zvaunoda. Wadii kubvisa zvimwe zvacho? Iipe kune rubatsiro kana kutengesa zvinhu zvakakosha kwazvo.
3. Feng Shui imba yako - ita shuwa kuti makamuri ako anoteerera pamisimboti yemaitiro ekare eChina.
4. Gadzirira Amagedhoni - kana, kana zvirinani, gadzirira iwe nemhuri yako zvakaipisisa nekurongedza bhegi rekurarama.
5. Shongedza chipfuwo chako - shamwari dzedu dzemhuka dzinoda kutarisirwa, saka wadii kuzviita kana iwe uchinge wakasuruvara?
chii chaunofunga kubiridzira muhukama
6. Kunhonga / kukanya - gadzira masheya ako echikafu chakagadzirirwa kana iwe uchida chimwe chinhu kubva mumwaka wayo wekukura.
7. Ronga chikafu chako kwemazuva manomwe anotevera - nenzira iyoyo haufanire kunetsekana pamusoro pezokubika gare gare (uye iwe unogona kutenga zvinodiwa zvinoshandiswa).
8.Bvisa zvako inbox - tora email yega yega uye kana kuidzima kana kuichengetera kune yakasarudzika folda. Wobva wagara pasi woyemura kushaya basa.
9. Gadzira runyorwa rwebucket - dzivisa kusurukirwa mune ramangwana nekunyora zvese zvinhu zvaunonyatsoda kuita muhupenyu (kuti iwe ugone kuzvironga uye kuzviita!)
Geza mota yako - kuva akatendeseka, iri kutsvaga grubby diki uye inogona kuita neakachena.
11. Ita basa remumba - kuzviita iwe paunenge uchinetseka zvinoreva kuti haufanire kuzviita iwe usiri.
12. Nyora kuda kwako - hapana munhu anofarira kufunga nezverufu, asi izano rakanaka kuve nerumwe rudzi rwehurongwa panzvimbo yechakaipa.
13. Tsvaga madhiri ari nani - kungave kune zvako zvekushandisa, yako TV package, kana yako inishuwarenzi, iwe ungangoda zvirokwazvo kuchengetedza imwe mari nekuchinja.
14. Ronga rwendo rwako runotevera rweresitorendi - ongorora mamenu, verenga wongororo, uye sarudza kwaunozoenda kunotevera. Nenzira iyoyo iwe wakazvironga zvese pamberi penguva.
15. Sunungura nzvimbo pafoni yako - bvisa chero mapikicha ausingade kunyatso chengeta uye kubvisa chero maapps ausingachashandise.
Zvinhu Zvakareruka Zvaunogona Kuita Kana Wakafinhwa
1. Verenga bhuku - zviri nyore kwazvo kuti usunungure kufinhwa kwako nekuzvipinza iwe mune inoverengeka yakanaka.
2. Fungisisa - inguva yakakwana yekudzidzira kufungisisa uye unogona kuzviita chero nguva chero nguva.
3. Teerera podcast - pane zviratidziro zvezvinenge zvese zvido zvinokwanisika uye ivo vanowanzo kuve vakasununguka kurira mukati.
4. Tarisa mifananidzo yekare - tora zvese nostalgic uye zviyeuchidze neshamwari kana mhuri nezvenguva dzekare.
5. Kumborara - nguva inopfuura nekukurumidza kana iwe wakarara. Zorora uye recharge mabhatiri ako.
6. Tambanudza - iwe unozonzwa zviri nani zvakanyanya mushure mekunge watambanudza mhasuru dzese mumuviri wako.
7. Geza - imwe nzira yekuzorora kana iwe uchinetseka uye uine nguva pamaoko ako.
8. Ita jigsaw - yakapusa, inoshanda grey nyaya, asi zvakare iri kutandara nenzira isinganzwisisike.
9. Fonera shamwari - ita iyo yausati wataura nayo kwekanguva. Izvo zvakanaka kubata kune mumwe nemumwe hupenyu.
10. Verenga nhau - zvakanaka kugara uchiziva. Wadii kuedza nhau dzako dzemunharaunda kuti ugare uchiziva nezvezvinhu zviri kuitika munharaunda mako?
Iwe Uri Anokanganisa Kuita Zvinhu Zvakakwana, Realist, Kana Kuongorora? (Quiz)
Ndeupi Keirsey Hunhu Hworudzi Uri Iwe?
Maitiro Eko Kugadzira Yehurefu-Kurefu Hukama Hwebasa Shanda: 20 Zvidimbu ZveZano
Kutaura Kunyepa Kwakachena: Kana IYE Uye PASI PASINA OK
Rondedzero Yemakumi mashanu Evanhu Kukurudzira Zvinangwa Kuti Uzvigadzirire Iwe Muna 2021
Kana Iwe Ukaita Izvi Zvinhu Zvishanu, Uri Kurarama Hupenyu Kudiki Kudiki
Kuzvizadzisa-Kutya Kutya Uye Kushushikana: Maonero Aunofunga Nyaya Dziripo
Wabi-Sabi: Maitiro Ekumbundira Iyo yeJapan Philosophy YeRunako Mukusakwana
Maitiro Ekuita Kumusoro Mushure mekurwa Uye Mira Kukakavara Muhukama Hwako
12 Mazano Ekushandisa Paunenge Uchinzwa Kushatirwa
Chaizvoizvo KUTI Uvimbe Nemumwe Munhu Zvakare: Nzira gumi dzekudzidza Kuvimba nevanhu
Kana Mukomana Wako Asina Nguva Yako, Ita Izvi
nhetembo mushure mekufirwa nemudiwa
kuudza mumwe munhu waunovada
zvinhu zvisinganzwisisike zvekuita kana iwe uchinetseka
kubatsira shamwari kupora kurambana
sign your ex husband anoda kuti udzoke
kushamisika sei musikana waunoda